ICT.com.mm မှာ Pokémon fan တွေအတွက် Razer ကထုတ်ထားတဲ့ Pokémon Pikachu Limited Edition ဖြစ်တဲ့ Keyboard, Wireless Earbuds, Mouse+Mat Bundle တွေ ဝယ်လို့ရပြီနော် ~ The ICT.com.mm Blog
Home » Review » Keyboards & Mice »
Keyboards & Mice, News, Review
ICT.com.mm မှာ Pokémon fan တွေအတွက် Razer ကထုတ်ထားတဲ့ Pokémon Pikachu Limited Edition ဖြစ်တဲ့ Keyboard, Wireless Earbuds, Mouse+Mat Bundle တွေ ဝယ်လို့ရပြီနော်
ကဲ IT ချစ်သူတို့ရေ ICT.com.mm မှာ Pokémon fan တွေအတွက် Razer ကထုတ်ထားတဲ့ Pokémon Pikachu Limited Edition ဖြစ်တဲ့ Keyboard, Wireless Earbuds, Mouse+Mat Bundle တွေ ဝယ်လို့ရပြီနော်…
စင်ကာပူ၊ အမေရိကန်တို့မှာ အခြေစိုက်ပြီး Computer hardware နဲ့ gaming hardware တွေ၊ တခြား digital electronics ပစ္စည်းတွေကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၂ထဲက ထုတ်လာတဲ့ Razer ကတော့ IT ချစ်သူ တွေကြားမှာ နာမည်ကြီးပြီးသားဆိုတော့ Razer Keyboard, Wireless Earbuds, Mouse+Mat Bundle တွေကတော့ သုံးဖူးသူတိုင်း သိပြီးသားဖြစ်လို့ ထပ်ညွှန်းပေးစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး‌နော်…
အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ အဝါရောင် Pika ရုပ်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ Pokémon fan တွေ တစ်မျိုးခြင်းဆီပဲ ဝယ်မလား? ၃မျိုးလုံး set လိုက်ပြီးပဲသုံးမလား? ဒီအောက်ကလင့်ခ်ထဲမှာ specification အပြည့်အစုံကို လေ့လာပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ..
Pokémon Pikachu Limited Edition ဖြစ်လို့ နောက်ကျသွားရင်တော့ မရလိုက်ဘဲနေမယ်နော်…
Razer Pokémon Pikachu Limited Edition Backlit Keyboard,
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/razer-pokemon-pikachu-limited-edition-backlit-keyboard
Razer Pokémon Pikachu Limited Edition True Wireless Earbuds,
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/razer-pokemon-pikachu-limited-edition-true-wireless-earbuds
Shop here: https://www.ict.com.mm/products/razer-pokemon-pikachu-limited-edition-mouse-mat-bundle
Newer Acer Swift3SF314-57G-55WV (i5-10th Gen) တွေ ICT.com.mm မှာ ဝယ်လို့ရပြီနော်
Older ICT.com.mm မှာ Samsung brand ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သုံး ပိုးသတ်စက်တွေကို ဈေးနှုန်းသင့်တင့်စွာနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ